Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato shucaaca qoraxda | Saadaasha Shabakadda
Ilayska qorraxda waa isbeddel muhiim ah oo saadaasha hawada oo u adeegta go'aaminta xaddiga "kuleylka" ee aan ka heli doonno qorraxda dusheeda. Qaddarkan shucaaca qorraxda waxaa beddelaya isbeddelka cimilada iyo haynta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo.
Shucaaca qoraxda ayaa awood u leh inuu kululeeyo dusha sare ee dhulka iyo walxaha (xitaa kuweenna) iyadoo si dhib leh kululaynta hawada. Intaas waxaa sii dheer, doorsoomahani waa mid aad muhiim u ah si loo qiimeeyo shaqada aan ka qabaneyno ladagaalanka isbedelka cimilada. Ma rabtaa inaad wax walba ka ogaato shucaaca qoraxda?
1 Shucaaca qoraxda wuxuu dhex maraa jawiga
2 Dhamaan jidhku waxay soo saaraan shucaac
3 Sida shucaaca qoraxda u shaqeeyo
4 Sideen u cabirnaa shucaaca?
5 Shucaaca qoraxda iyo saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo
6 Shucaaca qoraxda iyo isbedelka cimilada
Shucaaca qoraxda wuxuu dhex maraa jawiga
Markaan joogno xeebta mid ka mid ah maalmahan kuleylaha kulul, waxaan u jiifsanaa "qorraxda." Markaan sii joogno tuwaalka dheer, waxaan ogaaneynaa sida jirkeenu u kululeeyo una kordhiyo heerkulkiisa, ilaa aan u baahanahay inaan qubeysano ama aan hooska galno maxaa yeelay waan gubannay. Maxaa halkan ka dhacay, haddii hawadu sidaa u kululayn? Waxa dhacay waa taa falaadhaha qorraxdu waxay dhex mareen jawigayaga waxayna ku diirinayeen jidhkeenna kuleyl hawo leh.
Wax la mid ah waxa nagu dhacaya xaaladdan ayaa ah waxa ku dhacaya Dhulka: Jawigu wuxuu u dhow yahay 'hufnaan' shucaaca qoraxda, laakiin dhulka dushiisa iyo hay'adaha kale ee ku dul yaal ayaa nuugaya. Tamarta ay Cadceedu ugu wareejiso dhulka waxa loo yaqaan tamarta shucaaca ama shucaaca. Shucaac wuxuu ku dhex socdaa booska qaab mowjado ah oo xambaarsan tamar. Waxay kuxirantahay xaddiga tamarta ay wataan, waxaa lagu kala saaraa qaybta elektromagnetic-ka. Waxaan ka helnay mowjadaha ugu firfircoon sida gamma rays, X rays iyo ultraviolet, iyo sidoo kale kuwa tamarta yar sida infrared, microwaves iyo radio mowjadaha.
Dhamaan jidhku waxay soo saaraan shucaac
Dhamaan jidhku waxay soo saaraan shucaac ku saleysan heerkulkooda. Tan waxaa bixiya Sharciga Stefan-Boltzmann kaas oo sheegaya in tamarta jirku soo baxo ay si toos ah ula jaanqaadayso awoodda afraad ee heer kulkeeda. Tani waa sababta Qorraxda, alwaax gubanaya, jidhkeenna iyo xitaa gabal baraf ahi ay tamarta si tartiib tartiib ah ugu sii daayaan.
Tani waxay noo horseedaysaa inaan isweydiino su'aal: maxaan u awoodnaa inaan "u aragno" shucaaca qoraxda ka baxa ama qoryaha gubanaya mana awoodno inaan aragno shucaaca aan soo saareyno, dusha sare ee dhulka ama qeybta baraf ah? Sidoo kale, tani waxay kuxirantahay inta badan heerkulka uu gaaro midkasta oo iyaga kamid ah, sidaa darteedna, xaddiga tamarta ee ay inta badan soo saaraan. Heerkulka jirka oo sareeya, waxaa sii badanaya xaddiga tamarta ay ku sii daayaan hirarkooda, waana taas sababta ay u sii muuqan doonaan.
Qorraxdu waxay ku jirtaa heer kul ah 6.000 K waxayna soo saartaa shucaac inta badan hirarka mowjadaha la arki karo (guud ahaan loo yaqaan hirarka iftiinka), waxay kaloo soo saartaa shucaaca ultraviolet (kaas oo leh tamar badan waana sababtaas sababta ay u gubto maqaarkayaga muddo dheer soo-gaadhista) iyo Inta kale ee ay soo saarto waa shucaac infrared ah oo aysan indhaha bani-aadamka ka dareemin. Taasi waa sababta aynaan u dareemi karin shucaaca jirkeennu soo saarayo. Jirka bani'aadamku wuxuu ku dhow yahay 37 digrii Celsius, shucaaca uu soo daayana wuxuu ku jiraa infrared.
Sida shucaaca qoraxda u shaqeeyo
Xaqiiqdii ogaanshaha jirku inuu si joogto ah u sii daayo shucaac iyo tamar wuxuu su aal kale u keeni doonaa madaxaaga. Waa maxay sababta, haddii jirku soo saaro tamar iyo shucaac, miyay tartiib tartiib u qaboojiyaan? Jawaabta su'aashan waa mid fudud: inta ay sii deynayaan tamarta, iyaguna way dhuuqayaan. Waxaa jira sharci kale, oo ah kan isu-dheellitirka shucaaca, oo leh shey wuxuu soo saaraa isla qaddarka tamarta ah inta uu dhuuqayo, waa taas sababta ay u awoodi karaan inay joogteeyaan heer kulka joogtada ah.
Sidaa darteed, nidaamkeena dhulkeena-cimilo taxane ah ayaa ka dhaca kaas oo tamarta la nuugo, la sii daayo oo la muujiyo, sidaa darteed isu dheelitirka ugu dambeeya ee shucaaca gaara hawada sare ee cimilada qorraxda iyo tan u baxda hawada sare waa eber. Si kale haddii loo dhigo, celceliska heerkulka sanadlaha ayaa ah mid joogto ah. Marka shucaaca qoraxda uu soo galo Dhulka, badankiisa waxaa qaata dusha dhulka. In yar oo ka mid ah shucaaca dhacdada waxaa qaada daruuraha iyo hawada. Shucaaca intiisa kale waxaa ka muuqda dusha sare, gaasaska, daruuraha waxaana dib loogu soo celiyaa booska bannaanka.
Qaddarka shucaaca jirka ka muuqda marka loo eego shucaaca dhacdada waxaa loo yaqaan 'albedo'. Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa taas nidaamka-cimilada dhulka wuxuu leeyahay celcelis ahaan albedo ah 30%. Baraf dhawaan dhacay ama qaar si qoto dheer u dhisan oo cumulonimbus ah waxay leeyihiin albedo ku dhow 90%, halka lamadegaanka ay leeyihiin qiyaastii 25% iyo badaha qiyaastii 10% (waxay dhuuqayaan ku dhowaad dhammaan shucaaca iyaga gaara).
Sideen u cabirnaa shucaaca?
Si loo cabbiro shucaaca qorraxda ee aan hal dhibic ka helno, waxaan adeegsanaa aalad loo yaqaan pyranometer. Qaybtani waxay ka kooban tahay dareemayaal ku lifaaqan xagjir hufan oo gudbiya dhammaan shucaaca dherer aad u yar. Dareemuhu wuxuu leeyahay qaybo kala duduwan oo madow iyo caddaan ah oo u nuugaya qadarka shucaaca si ka duwan. Farqiga heer kulka ee udhaxeeya qeybahan ayaa lagu qiyaasayaa iyadoo loo eegayo qulqulka shucaaca (waxaa lagu cabiray watts halkii mitir laba jibbaaran).
Qiyaasta qadarka shucaaca qoraxda ee aan helno sidoo kale waxaa lagu heli karaa iyadoo la cabbiro tirada saacadaha qorraxda ee aan haysano. Si tan loo sameeyo, waxaan isticmaalnaa qalab loo yaqaan heliograph. Tan waxaa sameysma qeybta muraayada oo u jiheysan dhanka koonfurta juqraafi ahaan, taasoo u shaqeysa sidii muraayad weyn oo weyneysa, iyadoo uruurineysa dhammaan shucaaca laga helay barta dabka ee gubaysa cajalad warqad gaar ah oo qalin jabisay saacadaha maalinta.
Shucaaca qoraxda iyo saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo
Hore waxaan u soo sheegnay in cadadka shucaaca qoraxda ee soo galaya dhulka iyo waxa ka baxayaa ay isku mid yihiin. Tani gebi ahaanba run maahan, maxaa yeelay haddii ay sidaas tahay, heerkulka celceliska adduunka ee dhulkeennu wuxuu noqonayaa -88 digrii. Waxaan u baahanahay wax naga caawiya inaan sii haysano kuleylka si aan u awoodno inaan helno heer kulka noocan oo kale ah oo wanaagsan oo lagu noolaan karo kaasoo suurtogeliya nolosha meeraha. Taasi waa meesha aan ku soo bandhigno saameynta aqalka dhirta lagu koriyo. Marka shucaaca qoraxda uu ku dhufto dusha sare ee dhulka, wuxuu dib ugulaabanayaa nus nus jawiga si uu uga saaro hawada sare. Hagaag, waxaan ka faallaynay in daruuraha, hawada iyo qaybaha kale ee jawiga ay nuugaan qayb yar oo shucaaca qoraxda ah. Si kastaba ha noqotee, qaddarkan la nuugay kuma filna inay awood u yeelato inay ilaaliso heerkul deggan oo ay meeraheenna ka dhigto mid lagu noolaan karo. Sideen ula noolaan karnaa heerkulkan?
Waxa loogu yeero gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo waa kuwa gaaska hayaa qeyb ka mid ah heerkulka ka baxa dhulka dushiisa oo dib ugu noqda jawiga. Gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo waa: uumiga biyaha, kaarboon laba ogsaydhka (CO2), oksaydhyada oksaydhka, baaruudda oksaydhka, methane, iwm. Gaaska kasta ee lagu koriyo wuxuu leeyahay awood kala duwan oo uu ku nuugo shucaaca qoraxda. Awoodda badan ee ay u leedahay in ay nuugto shucaaca, kuleylka badan ayaa hayn doona umana oggolaan doono in ay dib ugu laabato bannaanka hore.
Taariikhda aadanaha oo dhan, fiirsashada gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo (oo ay ku jiraan kuwa ugu badan ee CO2) ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhayay. Kordhinta kororkan ayaa sabab u ah kacaankii warshadaha iyo gubida shidaalka shidaalka ee warshadaha, tamarta iyo gaadiidka. Gubashada shidaalka foosha sida saliidda iyo dhuxusha, waxay sababaan qiiqa CO2 iyo methane. Gaasaskan sii daaya sii kordhaya ayaa u keenaya iyaga inay hayaan xaddi badan oo shucaaca qoraxda ah oo aan u oggolaanayn in dib loogu celiyo bannaanka hore.
Tan waxaa loo yaqaanaa saameynta aqalka dhirta lagu koriyo. Si kastaba ha noqotee, kordhinta saameyntan waxaan ugu yeernaa aqalka dhirta lagu koriyo waa wax-soo-saar, Maaddaama waxa aan qabaneyno ay sii kordhayaan celceliska heerkulka adduunka oo aad iyo aad u badan. Isku soo wada duuboo gaasaskan nuugaya shucaaca ee jawiga, kuleylka badan ayaa heyn doona sidaas darteed, heerkulku wuu sii kordhayaa.
Shucaaca qoraxda iyo isbedelka cimilada
Diirimaadka adduunka ayaa laga yaqaan adduunka oo dhan. Kordhinta heerkulka sababtoo ah haynta weyn ee shucaaca qorraxda ayaa sababa isbeddel ku yimaada cimilada adduunka. Micnaheedu maahan oo keliya in celceliska heerkulka meeraha uu kordhayo, laakiin in cimilada iyo wax kasta oo ku soo kordha ay is beddeli doonaan.
Kordhinta heerkulku waxay keenaysaa xasilooni-darrada hawada, qulqulka badweynta, qaybinta noocyada, isku xigxiga xilliyada, kororka astaamaha saadaasha hawada (sida abaaraha, daadadka, duufaannada ...), iwm.. Taasi waa sababta si aan ugu soo ceshano isku dheelitirnaanta shucaaca si xasiloon, waa inaan yareynaa qiiqa gaaska lagu sii daayo oo aan dib ugu helno jawigeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Shucaaca qoraxda
Cimilada sanadkii 2016 ayaa jabisay rikoorro badan